Tsy fantatr’olona, fa fantatr’Andriamanitra
"Ny Tompo mahalala ny azy. 2 Timoty 2:19 (Hoy Jesosy:) Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy." Jaona 10:27
Nandeha nitokana sekoly iray ny mpanjakavavy tany Angletera. Niteny fohy tamin’ireo mpianatra nanao fanamiana izy. Taorianan’ny lanonana dia nisy zazavavy kely iray nidradradradra nitomany. Velona ahiahy ny mpampianatra, ka nanontany azy hoe: «Fa nahoana ianao no mitomany? Tsy afaka nahita ny mpanjakavavy angaha ianao?
- Nahita azy aho kah, fa izy kosa tsy mba nahita ahy!»
Mazava ho azy fa tsy afaka nijery manokana ny mpianatra tsirairay ny mpanjaka.
Isika ve indraindray, amin’izao vanimpotoan’ny solosaina sy antontan’isa izao, tsy mahatsapa tena toy ny mari-daharana fotsiny? Mari-daharana any amin’ny toeram-piahiana ara-tsôsialy, mari-daharana any amin’ny hôpitaly, mari-daharana any amin’ny banky, mari-daharana tsy fantatra eo anivon’ny vahoaka marobe… Dia manenika antsika ny fahatsapana mampitebiteby fa tsy misy olona mba miraharaha antsika.
Nefa dia misy Iray mahafantatra ahy. Fantany ny anarako. Reny ny sentoko. Hitany aho, na aiza na aiza misy ahy. Tena tonga saina tamin’izany i Davida mpanjaka, raha nanoratra hoe: “Ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny” (Salamo 139:2).
Ianao izay mamaky izao teny izao, tsy fantatrao angamba ny Tompo Jesosy, fa Izy kosa mahafantatra anao, mahafantatra ny anaranao, toy ny nahafantarany ny anaran’i Zakaiosy, na dia mbola tsy hitany mihitsy aza (jereo Lioka 19:1-10). Apetraho aminy ny fitokisanao, dia ho sambatra ianao mahare Azy miteny aminao hoe: “Aza matahotra ianao, fa efa nanavotra anao Aho ; efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao!” (Isaia 43:1).